10 En İyi Uygun Fiyatlı Makao Oteli - TripAdvisor
#71/96 Otel; Makao bölgesi
#47/96 Otel; Makao bölgesi
#43/96 Otel; Makao bölgesi
#58/96 Otel; Makao bölgesi
#78/96 Otel; Makao bölgesi
#82/96 Otel; Makao bölgesi
#69/96 Otel; Makao bölgesi
#35/96 Otel; Makao bölgesi
#49/96 Otel; Makao bölgesi
#56/96 Otel; Makao bölgesi
#52/96 Otel; Makao bölgesi
#45/96 Otel; Makao bölgesi
#48/96 Otel; Makao bölgesi
#39/96 Otel; Makao bölgesi
#62/96 Otel; Makao bölgesi
#51/96 Otel; Makao bölgesi
#53/96 Otel; Makao bölgesi
#66/96 Otel; Makao bölgesi
#68/96 Otel; Makao bölgesi
#30/96 Otel; Makao bölgesi
“Macao ya 5. gelisimiz normalde sehir merkezindeki otellerde kaliyorduk. Bu sefer booking uzerinden bu oteli gordum. Yorumlar gayet iyi ve 2015 ekim de acildigi icin yeni bir otel diye tercih ettik. Otel harika...”
#32/96 Otel; Makao bölgesi
#73/96 Otel; Makao bölgesi
#9/96 Otel; Makao bölgesi
#64/96 Otel; Makao bölgesi
#67/96 Otel; Makao bölgesi
#70/96 Otel; Makao bölgesi
#87/96 Otel; Makao bölgesi
#88/96 Otel; Makao bölgesi
Makao yakınlarındaki oteller (2)
Makao noktasına 1,6 km mesafede
Makao noktasına 1,7 km mesafede